Mifandraisa aminay - Hebei Kingmetal Flange And Fitting Manufacturing Co., Ltd.
Ny vokatra dia aondrana manerantany. Ny mpanjifanay dia afa-po foana amin'ny kalitao azo antoka, ny serivisy ho an'ny mpanjifa ary ny vidin'ny fifaninanana. Ny tanjonay dia ny "manohy mahazo ny tsy fivadihanay amin'ny alàlan'ny fanokanana ny ezaka ataonay amin'ny fanatsarana hatrany ny vokatra sy serivisinay mba hiantohana ny fahafaham-pon'ny mpampiasa farany, ny mpanjifa, ny mpiasa, ny mpamatsy ary ny vondrom-piarahamonina manerantany izay iarahanay miasa".
valan-javaboary xizhaotong, tanàna shijiazhuang, hebei, Sina
Ny ekipanay dia mifikitra amin'ny toe-tsaina "Fampiroboroboana mifototra amin'ny fampandrosoana sy fifandraisana", ary ny foto-kevitry ny "Kalitaon'ny kilasy voalohany amin'ny serivisy tsara". Araka ny filan'ny mpanjifa tsirairay dia manome serivisy namboarina sy natao manokana izahay hanampiana ny mpanjifa hahatratra ny tanjon'izy ireo. Tongasoa ny mpanjifa avy any ivelany sy any ivelany hiantso sy hanontany!
Azafady mifandraisa aminay amin'ny alàlan'ny fandefasana mailaka aminay na miantso anay raha manana fanontaniana momba ny orinasa izahay. Mety hahazo ny mombamomba ny adiresy avy amin'ny pejinay web ihany koa izahay ary ho tonga any amin'ny orinasanay mba hanao fanadihadiana an-tsaha momba ny varotra ataonay. Matoky izahay fa hizara zava-bita ary hamorona fifandraisana fiaraha-miasa matanjaka amin'ireo namanay amin'ity tsena ity. Izahay dia manantena ny fanontanianao.
AZO ATO AMIN'NY 9 maraina hatramin'ny 6 hariva